OnePlus 9 kpughere: e meziri atụmatụ ya | Gam akporosis
Eziokwu bụ na ntapu metụtara OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro. Anyị maara nke ahụ ma ụdị ga-abata na chaja, n'adịghị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ dịka Apple ma ọ bụ Samsung. Ma ugbu a, anyị amalite inwe nkọwa ọhụrụ gbasara njirimara ya
Ugbu a, ihe oyiyi ọhụrụ agbapụtala ebe anyị nwere ike ịhụ nkọwa ndị ọzọ nke imewe ahụ, na mgbakwunye na njirimara njirimara bụ isi nke OnePlus 9 ga-arịgo.
Snapragon 888 na atụmatụ ndị ọzọ nke OnePlus 9
Iji malite, a kwadoro ya na ọ ga-arịgo ihe nhazi Snapdragon 888, ọla dị na okpueze ndị na-emepụta Korea yana na ọ na-enye arụmọrụ karịa obi abụọ ọ bụla. Na SoC dị ike a, ị ga-agbakwunye opekempe nke 8 GB nke Ram, ọ bụ ezie na ọ dị ka a ga-enwe ụdị vitamin ọzọ ọzọ yana na ọ ga-enwe RAM 12 GB.
Banyere panel nke ga-arịgo ọdụ ahụ, a na-atụ anya na ihuenyo OnePlus 9 ga-abụ nke a 6.55-anụ ọhịa AMOLED panel nke ga-eru mkpebi HD zuru ezu. Ọ bụ ezie na akụkụ kachasị adọrọ mmasị na-abịa na ume ume nke 120 Hz (amabeghị ya ma ọ ga-agbanwegharị) iji nwee ọmarịcha ahụmịhe onyonyo. Ee ee, OnePlus 9 Pro ga-enwe kọlụm 2K na-ejikwa otu njirimara ahụ.
Anyị enwewo ike ịmata nkọwa ọhụrụ nke batrị nke OnePlus 9, nke ga-enwe ikike 4.500 mAh na 65W ngwa ngwa na-egosi ụzọ iji nye nnwere onwe dị mma. Anyị enweghị ọtụtụ data na ikike nke ime nke ngwaọrụ ahụ, mana ihe ezi uche dị na ya bụ na ọ na-amalite site na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
Na usoro nke imewe, dị iche iche leaked oyiyi ahapụ nnọọ nta ka echiche. The OnePlus 9 ga-anya isi igwefoto nwere ihu n'ihu iji zere ọhụụ a na-ahụkarị, yana obere obere igbe nke mere na ngwụcha ihuenyo bụ isi protagonist. Bọchị ọ ga-ewepụta ya? N'oge a ihe omimi zuru oke ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Ihe ngosi nke njirimara nke OnePlus 9
Etu esi gbanwee oke leta na Google Chrome